Iibsashada Dabeecadda Way Is Bedeshay, Shirkadaha Ma Bedelin | Martech Zone
Mararka qaarkood waxbaan u qabanaa si fudud maxaa yeelay waa sidii lagu sameeyay. Qofna ma xasuusto sababta saxda ah, laakiin waan sii wadeynaa xitaa haddii ay waxyeello naga soo gaarto. Markii aan eegay kala iibsiga caadiga ah iyo kala sareynta suuqgeynta shirkadaha casriga ah, qaab dhismeedka isma bedelin tan iyo markii aan helnay dad iibiya riixaya laamiga iyo garaacista doolarka.
In badan oo ka mid ah shirkadaha aan booqday, “iib” badan ayaa ka dhacaya dhinaca suuqgeynta derbiga. Iibinta ayaa kaliya qaadaneysa amarka. Nasiib darrose, sharciyada ururka awgood, Waaxyaha Iibka ayaa sii wadaya in lagu tiriyo dadaalladaas. Waa aaggan cirro leh ee ka dhigaya cabbiraadda saameynta bulshada suuqgeynta mid adag.
Waxaan wax ka qoray sida iibku uga faa'iideysan karo warbaahinta bulshada iyo sidoo kale isbeddelka ku yimaada dabeecadda iibsadaha qoraallo dhowr ah:
Isbadalka Qaabka Iibka
Shan Talaabooyin Xiriirinta Bulshada ee Xirfadlayaasha Iibinta
Shirkadaha qaar oo aan ogahay inay u guureen Suuq geyn gabi ahaanba iibka halka kuwa kalena ay gebi ahaanba ka baxeen ururada Iibka. Aniguba u doodayn maayo, laakiin waa wax xiiso leh in jahwareer badani ka dhaco markay timaado halka lagu maalgalinayo iibintaada iyo miisaaniyadda suuqgeynta. Sidoo kale ma jiro nidaam taageeraya cabirka iibka bulshada… halka alaabtaada lagu iibiyey iyada oo aan lagaa caawinayn suuqgeynta ama iibinta laakiin bulshadaada.
Nidaamka dhaqameed ee ka dhex jira ururku wuxuu dhiibaa deynta maaddaama rajo laga qabo habka iibka.
Xaqiiqda, dabcan waa in iibku ka imaan karo Iibka, Suuqgeynta ama xitaa Beeshaada. Imisa jeer ayaad iibsatay alaab ama adeeg ku saleysan talo ka timid bulshadaada?
Waa wax ila yaab leh in shirkado badani aysan ka faa'iideysan bulshada iyagoo adeegsanaya adeegyada suuq geynta. Waxaan ku leeyahay xisaabaad suuq-geyn ku xiran shey kasta iyo heshiisyo gudbin ah dhammaan iibiyeyaashayda. Waxaan helayaa iibinta ururadaas markaa waa sax kaliya inaan labadoodaba helo sumcadda iyo sidoo kale abaalmarinta!
Fikrad ahaan, 'kudhowaad' kama dhici doonto Iibka, Suuqgeynta ama Bulshada. Dhamaadku wuxuu ku dhici doonaa habka xisaabinta xisaabta, isagoo hubinaya in iibka si sax ah loogu tiriyo isha saxda ah. Tani waxay u oggolaaneysaa shirkadaha inay aqoonsadaan halka ay tahay inay maal-gashadaan ilaha.
Iibinta, Suuqgeynta, iyo Waxsoosaarka waa in ay midba midka kale uga tartamaan ilaha iyo natiijooyinka. Waxay sidoo kale ku qasbanaan lahaayeen inay si dhow u wada shaqeeyaan midba midka kale si loo hubiyo in farriinta iyo calaamadeynta ay joogto tahay. Kharashka u dhow waa in laga cabbiraa dhammaan saddexda kheyraad. Wareejinta amaahda qaarkood way dhici kartaa, dabcan refer gudbinta ayaa aadi karta websaydhka oo lala xiriiri karaa iibka wixii macluumaad dheeraad ah. Xaaladdaas, kooxda iibku waxay kobciyaan oo keenaan iibka si loo xiro.
Waxaad ogaan kartaa inaad haysato badeecad ama adeeg aad ufiican oo ku kobcaya afkaaga kaligiis… kiiskan waxaad aad uga fiicnaan laheyd inaad maalgashi ku sameyso sheyga marka loo eego iibka iyo suuqgeynta. Dabcan, haddii aysan xirmin wax ka dhacaya bulshada dhexdeeda, kooxda maareynta wax soo saarka waa in mas'uul laga ahaadaa - waxaa jirta fursad wanaagsan oo ah in wax soo saarkaagu uu yahay mid liita.
Qaabkii hore ee wax-u-qabashadu si fudud uma shaqeynayo. Qeybo badan oo suuq-geyn ah ayaa leh qiime xirmo oo layaableh, laakiin maaddaama iibku helayo sumcadda - sidoo kale waxay helayaan ilaha. Waxaan arkay waaxyo badan oo suuq geyn ah oo mucjisooyinka la jiidaya iyadoo miisaaniyaddu uring ku shubmayso ururkii ay kooxda iibku kaliya amarka ka qaadanayeen - laakiin ay weli helayaan sumcadda, ilaha iyo gunooyinka. Haddii hoggaanka websaydhku si toos ah uga boodo goobta oo uu ugu dhowaado kooxda koontada, waaxda suuqgeynta ayaa heli karta dhibcaha kaliya.
Haddii shirkaduhu rabaan inay fahmaan sida ay muhiim u tahay xeelad kasta xeeladdooda ganacsi guud, waxay u baahan yihiin inay sidoo kale awood u yeeshaan inay si sax ah u cabbiraan halka iibku ka imanayo!
Tags: waxqabadka contentfoomamkaFaransiiskaJarmalwarshadaha roiMari Smithcaddayntaiibiso internetkaSuuqgeynta Xiriirka Cusub